Dhageysigii Rafcaanka oo Dib loo Dhigay
Maxkamadda rafcaanka ee gobalka Baraadir ayaa maanta dib u dhigtay dhageysiga dacwadda rafcaanka ee wariye Cabdicasiis Koronto iyo haweeney sheegaty inay ciidanka dowladdu kufsadeen, iyadoo ay maxkamadda gobalku horey ugu xukuntay min halsano oo xarig ah.
Garsooraha maxkamadda ayaa sheegay, in dacwadda dib loo furay lana keeni karo wax walba oo cadeymo ah oo sheegaya in labadan qof aaney danbi laheyn, iyadoo qareenada difaacaya labadaan ruuxna ay soo gudbiyeen qoraalo ay ku cadeynayaan in xukunkii labadan qof uu ahaa mid aan cadaaladda ka fog.
Qareenka wariyaha iyo gabadha sheegtay in ciidanka dowladdu kufsadeen Mohamed Mohamud Afrax, ayaa sheegay in dood dheer ka dib dhageysiga docwadda dib loo dhigay, ayna dacwaddu dib u furmi doonto Arbacada danbe oo ay taariilhdu ku beegtan tahay 27ka bishan February.
Wareysiga Qareenka oo dhan halka hoose ka dhageyso.
Wareysiga Qareenka Eedeysanayaasha.